HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်နဂါးလှေပွဲတော် Inter-Agency ကစိတ်လှုပ်ရှား
21 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, လှုပ်ရှားမှုများ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
စက်တင်ဘာလ 21 နှင့် 22 IMM Orhangazi စီးတီး Park မှာကျင်းပမည့်ကုမ္ပဏီ IMM Inter-Agency ကနဂါးလှေပွဲတော်, running ၏အားကစားအတူတူဖြစ်စေသောပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအတွက်မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းများရန်ဘဏ်လုပ်ငန်းမှာထံမှစွမ်းအင်မှခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း။
ဒုတိယနှစ်ပတ်လည်နဂါးလှေပွဲတော် IMM Inter-Agency ကန်ထမ်း 53 1500 အမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများအားအနီးကပ်ပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ်ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ တစ်နေ့တာအတွင်းသူတို့ချန်ပီယံအသင်းများ2ဖြစ်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အားကစားပရိသတ်တွေရှိသမျှကိုလူမျိုးပွဲတော်ကာလအတွင်းကျင်းပလိမ့်မည်အခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါ 21 နှင့် 22 စက်တင်ဘာလ IMM နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ဇွန်လနှင့် HSB Group မှအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ကျင်းပတဲ့ပွဲတော်၏ပထမဦးဆုံးဒုတိယ Orhangazi စီးတီး Park မှာကျင်းပပါလိမ့်မည်။
အဖြစ်အပျက်ကလူxnumx'ş 20 ၏သင်း၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူကျင်းပလိမ့်မည်တူရကီကနူးဖက်ဒရေးရှင်းခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူကျင်းပပါလိမ့်မည်။ အားကစားသမားနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများ၏ပွဲတော်ဟာသူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်အတူလူပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ်။
ဇာတ်စင်ရှိုးများ, ကခုန်ပွဲများနဲ့ DJ ဖျော်ဖြေပွဲအဖြစ်အဖွဲ့အစည်း၏ဝိညာဉ်ကိုရှိအောင်လုပ်ဖို့ကျင်းပလှေပြိုင်ပွဲများ၏လုပ်လုပ်ခြင်းအတူတူခြမ်းရာအရပ်ကိုယူပါလိမ့်မယ်။ သင်တန်းသားများကိုပွဲတော်ရဲ့ဂုဏ်နပြပွဲသင်းမှာအလွန်ပျော်စရာတနင်္ဂနွေဝင်ပါလိမ့်မယ်ဆုဖလားနှင့်အတူချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။
ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအတွက်မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းများရန်ဘဏ်လုပ်ငန်းမှာထံမှစွမ်းအင်မှပွဲတော်ခရီးသွားလုပ်ငန်း, ကုမ္ပဏီ၏ဝန်ထမ်းများကိုအတူတကွတတ်၏။ IMM နဂါးလှေပွဲတော် Inter-Agency ကအတူတူအားကစားသမားများနှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်ယင်း၏စွမ်းရည်ကိုအားကောင်းစေ။
balance, ကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ကားများနှင့်အဖွဲ့သည်ဝိညာဉျကိုလည်းပူးတှဲအတူဖျော်ဖြေလှေလှော်အားကစားသမားဒရမ်သမားနဲ့ helmsman အတွက်အာရုံစိုက်, 250 မီတာသင်တန်းဖွံ့ဖြိုး။
Maltepe ကမ်းခြေ IMM အချင်းချင်းစိတ်လှုပ်ရှားအတွက်နဂါးလှေပွဲတော် 28 / 06 / 2019 အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်, အမြူနီစီပယ် IMM Inter-Agency ကနဂါးလှေပွဲတော်ကစီစဉ်အရှိဆုံးကောင်းစွာ-တက်ရောက်ခဲ့သည်အားကစားဖြစ်ရပ်များထဲကတစ်ခုကဒီတနင်္ဂနွေကျင်းပပါလိမ့်မည်။ IMM Orhangazi ပွဲတော်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍန်ထမ်းအားကစားတို့နှင့်ကြီးသောဖျော်ဖြေရေးနှစ်ဦးစလုံးလုပ်ဖို့လူရာပေါင်းများစွာဖျော်ဖြေကြလိမ့်မည်, စီးတီး Park မှာကျင်းပပါလိမ့်မည်။ HSB Group နှင့် "IMM နဂါးလှေပွဲတော်" 29 နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ကျင်းပလိမ့်မည်သည့်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ကတူရကီ၏နူးအဖွဲ့ချုပ် - 30 ဇွန်လတွင်ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ အမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများသည်များ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူကျင်းပလိမ့်မည်သည့်နဂါးလှေလှော် FESTIVAL5လူတစ်ထောင်ပါလိမ့်မယ် HOST က Inter-Agency ကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနဂါးလှေပွဲတော်အတွက်အသင်းအနေဖြင့်တစ်ဦးစုစုပေါင်း 85 2000 အားကစားသမားပါဝင်ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်။ အဆိုပါပွဲတော် ...
TCDD ဆက်နွယ်မှုနိုင်ငံတကာချစ်ကြည်ရေးဘောလုံးပြိုင်ပွဲပြိုင်ပွဲများတွင်ဆွတ်ခူး 06 / 04 / 2018 TÜDEMSAŞTÜLOMSAŞနှင့်TÜVASAŞအချင်းချင်းအေဂျင်စီဘောလုံးပြိုင်ပွဲလှံတံ၏စည်းလုံးကိုယ်စားပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းဆွေးနွေးပွဲကာလအတွင်းကျင်းပခဲ့သည်။ လေ့ကျင့်ရေးအပြီးတွင်အခမဲ့အချိန်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်ကျင်းပပြိုင်ပွဲ, ဆက်စပ်န်ထမ်းအနေဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ပေါင်းခဲ့သည်။ လူပျို circuit ကို, လိဂ်ပွဲစဉ်၏နည်းလမ်းညွှန်ကြား Star Wars ကယခင်ဘောလုံးဒိုင်လူကြီးကစားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲ2အတွက်TÜDEMSAŞအသင်းပွဲစဉ်, 1 ပွဲစဉ် TULOMSAS အသင်းအနိုင်ရယူခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကဦးဆောင်နိုင်မတိုင်မီTÜVASAŞအဖွဲ့သည်ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံး။ အခွအေနေရမှတ်TÜDEMSAŞ3-25 TULOMSAS TÜVASAŞ - အဆိုပါကန်ထရိုက်တာTÜDEMSAŞ49 -3TÜVASAŞရပ်TÜDEMSAŞ -6TÜVASAŞ - အဆိုပါကန်ထရိုက်တာ3- 0
အဲဒီကော်ပိုရိတ်အဖွဲ့အစည်းများစိတ်ကြိုက်အသံစခွေငျးငှါ 100 16 / 08 / 2016 အဲဒီကော်ပိုရိတ်အဖွဲ့အစည်းများ 100 မှစိတ်ကြိုက်အသံစခွေငျးငှါ: အပုဂ္ဂလိကပိုင်အထုပ်များ၏အတိုင်းအတာနှင့်ပတ်သက်သောအများပိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကျော် 100 အငြင်းပွားဖွယ်ရာလယ်ပြင်ကြာပါသည်။ သူကတကစီးပွားရေးကိုဗျူရိုကရက်များ၏အစိတ်အပိုင်းအစိုးရ၏စီးပွားရေးရေးရာ၏ MHP Samsun လက်ထောက် Erhan usta ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်များကိုသတ်မှတ်ခြင်းခံရလိမျ့မညျပုဂ္ဂလိကပိုင်၏အတိုင်းအတာမထွက်ပြီးနောက်အားလုံးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်၎င်းတို့၏ဥပဒေများကိုအကြောင်းကြားရန်သူကပြောပါတယ်။ သငျသညျစီးပှားထူထောင်မှုအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အစုရှယ်ယာအမျိုးမျိုးတို့ကို၏ပုဂ္ဂလိကပိုင်နယ်ပယ်အတွက်ဖြစ်ခွင့်ပြုကြောင်းအထူးဘတ်ဂျက်အဖွဲ့အစည်းများဥပဒေရေးရာစည်းမျဉ်းများဆွေးနွေးမှုများဖြစ်ကြသည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကယင်းစီမံကိန်းနှင့်ဘတ်ဂျက်ကော်မရှင်ယနေ့ပါလီမန်အထွေထွေညီလာခံမှာအခြေအတင်ဆွေးနွေးကြလိမ့်မည်အဖြစ်, ဂျကဆိုသည်။ MHP Samsun လက်ထောက် Erhan usta, "ဤဆောင်းပါးတွင် ...
TCDD ညွှန်ကြားရေးမှူး VANGOLU ကူးတို့ဖြစ်ပြီး၎င်း၏ကြီးကြပ်ဆောကျမှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ, အိမ်နှင့်တင်ဒါကျောက်မီးသွေးဝယ်ယူမှု၏တဲ 2012 2013-170 YEAR တွင်တန်ချိန် ON ဖမ်းဆီးရမိ 03 / 08 / 2012 နူးညံ့သောကိုယျစားလှယျကူးတို့လုပ်ငန်းရုံး / TATVAN-BİTLİSနူးညံ့သောတုန့်ပြန်ŞÜKRÜÇELİKYÜREKနူးညံ့ ADDRESS ကိုVANGÖLÜကူးတို့စစ်ဆင်ရေးကုန်စည်ဦးစီးဌာနနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူကော်မရှင်ဖုန်းနှင့် NO0434 825 21 050434 825 21 10 တင်ဒါကြော်ငြာနေ့စွဲ 30 / 07 / 2012 လေလံရက်စွဲကိုဖက်စ်နဲ့ TIME က 10 / 08 / 2012 တွင် TIME: 10,00 SPECIFICATION, PRICE 100 - လေလံနှုန်းနုဝယ်ယူရေး FILE ကို NUMBER ကို 2012 / 96659 e-mail လိပ်စာ, ဖွဲ့ TCDD VANGOLU ကူးတို့ညွှန်ကြားရေးမှူး Administration Building အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ, House vangoluferibotsatinalma@tcdd.gov.t ဖြစ်ပါသည်၏ subject လေလံ oN တဲနှင့်ဝယ်ယူမှု၏ကျောက်မီးသွေး 2012 2013-170 နှစ်ပေါင်းတန်ချိန်ဖမ်းဆီးရမိ။ သမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကူးတို့ Land ဗန် TATVAN ၏ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်အဘိတ်အလုပ်မှာအကောင်အထည်ဖော်မှုစီမံကိန်း 13 / 11 / 2012 application များနှင့် VAN ကူးတို့ဆိပ်ခံတံတားစီမံကိန်းကိုအလုပ်ဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူအများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ OF Revival TATVAN ပြင်ဆင်မှု နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2012 / 162958 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Talatpaşa Boulevard အဘယ်သူမျှမ:3ALTINDAĞ / GAR / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123090515 / 4292 - 3123241330 ဂ) E-Mail ကလိပ်စာ: နုက) သဘာဝ, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်၏ https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-service ကိုဘာသာရပ်: စာချုပ်၏သဘောသဘာဝ, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်နှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို tasinmazmallardairesi@tcdd.gov.t အင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်သုံး) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါသည် ECAP (အီလက်ထရောနစ်ပြည်သူ့အပေါ်သတင်းအချက်အလက် ...
Maltepe ကမ်းခြေ IMM အချင်းချင်းစိတ်လှုပ်ရှားအတွက်နဂါးလှေပွဲတော်
TCDD ညွှန်ကြားရေးမှူး VANGOLU ကူးတို့ဖြစ်ပြီး၎င်း၏ကြီးကြပ်ဆောကျမှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ, အိမ်နှင့်တင်ဒါကျောက်မီးသွေးဝယ်ယူမှု၏တဲ 2012 2013-170 YEAR တွင်တန်ချိန် ON ဖမ်းဆီးရမိ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကူးတို့ Land ဗန် TATVAN ၏ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်အဘိတ်အလုပ်မှာအကောင်အထည်ဖော်မှုစီမံကိန်း
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ယာဉ်မောင်း (ကူးတို့ရုံးမှ TCDD VANGOLU) ကားတစ်စီးငှားရမ်းဝန်ဆောင်မှုရလိမ့်မယ်
33 ။ အစ္စတန်ဘူလ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Renault ကအင်ဂျင်ကပြောပါတယ်